Ungazisebenzisa kanjani izenzo zomdabu ze-3D Touch ku-iOS 10 (I) | Ngivela kwa-mac
Ungazisebenzisa kanjani izenzo zomdabu ze-3D Touch ku-iOS 10 (I)
Ngokufika kwe-iOS 10 ngokusemthethweni ngoSepthemba 13, I-Apple igxile emizameni yayo eminingi ekwandiseni ukusebenza kwe-3D Touch ukuze abasebenzisi bakwazi ukuthola okuningi kule ndlela entsha yokuxhumana ne-iPhone yethu.
Uma une-iPhone 6s kuya phambili, kukhona anhlobonhlobo yezimpawu zokuthinta ze-3D ongazisebenzisa manje nge-iOS 10, ikakhulukazi kusuka kusikrini sasekhaya uqobo.
1 Yazi konke ongakwenza nge-3D Touch ne-iOS 10
3 Isimo Sezulu Nezindaba
4 Ikhalenda Nezikhumbuzi
5 Izithombe nekhamera
6 Imeyili Nemilayezo
7 Ucingo, Oxhumana nabo ne-FaceTime
Yazi konke ongakwenza nge-3D Touch ne-iOS 10
Kule ngxenye nengxenye yesibili yalesi sihloko, sizokwenza ukubuyekeza okuphelele kohlelo lokusebenza lwendabuko lwe-Apple manje esinoxhaso lwe-3D Touch, izenzo ezifinyeleleka kuzithonjana zazo neminye imisebenzi ewusizo.
Ngokusobala, ngokuya ngemikhuba yokusetshenziswa komsebenzisi wasekhaya, ezinye zizosebenza kakhulu kunezinye kepha noma kunjalo, zonke zilusizo kakhulu ngokubambisana
Ezinye zezici eziwusizo ze-3D Touch zingatholakala ngokucindezela ngokuqinile kusithonjana sohlelo lokusebenza lwezilungiselelo. Lokhu kukuvumela ukuthi ufinyelele izikrini ze-Bluetooth ne-Wi-Fi ukuxhuma ngokushesha idivayisi engenantambo noma ukuxhuma kunethiwekhi ngokulandelana.
Isimo Sezulu Nezindaba
Ngokucindezela ngokuqinile kusithonjana sohlelo lokusebenza lwe-Apple News uzothola ifayela le- ukubuka kuqala kwesihloko sokugcina. Ungayifinyelela ngqo. Futhi unokufinyelela okuqondile kusigaba esenzelwe wena esithi "Okwakho" noma kunoma yimuphi omunye umthombo wezindaba owukhethile.
Uhlelo lokusebenza lwe-Weather lunewijethi entsha yokubuka kuqala ongayifinyelela kusuka kusikrini esikhulu, enezinketho zokuthi qalisa uhlelo lokusebenza ngqo ekubikezelweni kwendawo ethile. Futhi uma ungakangezi iwijethi okwamanje, uzobona inketho ethi 'Faka iwijethi' ngakwesokudla phezulu kokubuka kuqala.
Izithonjana zohlelo lokusebenza lweKhalenda Nezikhumbuzi zifaka phakathi izinketho ezikuvumela ukuthi ungeze imicimbi noma ungeze izikhumbuzo zezinhlu ezithile ngqo ngokusebenzisa umsebenzi we-3D Touch.
Futhi, uma isaziso seKhalenda sivela phezulu kwesikrini, ungacindezela ngokuqinile ukuthola ezinye izinketho. Umcimbi ungahlehliswa, kanti isimemo singamukelwa noma senqatshwe ngaphandle kokufaka isicelo esigcwele..
Ngendlela efanayo, uma uthola isaziso sesikhumbuzi esibukweni, ungasifaka umfutho kuso ukumaka isikhumbuzi leso njengoba sesiqediwe, noma ukhethe ukwaziswa futhi ngesinye isikhathi.
Isithonjana sohlelo lokusebenza lwezithombe sinikeza izinqamuleli kuqoqo lakho lesithombe, kanye nezinketho zokubuka isithombe esisanda kuthathwa, izithombe ozimake njengezintandokazi, nenketho yokusesha esheshayo. Okwamanje, isithonjana sohlelo lokusebenza lweKhamera sinikeza izinqamuleli noma amashothikhathi okuthatha isithombe esisha, ukuqopha ividiyo, noma ukuthatha isithombe ozishuthe sona.
Uma ucindezela kanzima kusithonjana sohlelo lokusebenza lweMeyili, uzokwazi ukubuka izinqamuleli eziya ebhokisini lakho lokungenayo, kuma-imeyili owathola koxhumana nabo obathandayo, sesha i-imeyili yakho, futhi ufinyelele ngqo esikrinini ukuze wakhe umyalezo omusha.
Kusithonjana sohlelo lokusebenza loMlayezo, uzothola izinqamuleli ezingxoxweni zakho zakamuva nokwakhiwa kwengxoxo entsha.
Futhi ungakhohlwa ukuthi uma ucindezela kanzima kusaziso se-iMessage, ungaphendula lowo myalezo ngaphandle kokufaka isicelo.
Ucingo, Oxhumana nabo ne-FaceTime
Ngokucindezela ngokuqinile kusithonjana sohlelo lokusebenza lwefoni, uzokwazi ukufinyelela kumenyu entsha ye-pop-up ekunikeza izinketho zokushaya ucingo kwabanye oxhumana nabo obathandayo, dala oxhumana naye omusha, useshe oxhumana naye okhona bese ubheka okwakamuva kakhulu ucingo.
Izinqamuleli ezimbili zokuqala zinikezwa ingcindezi eqinile kuhlelo lokusebenza loxhumana nabo, okunikela ngokungeziwe ukukuyisa ngqo ekhadini lakho lolwazi. Isithonjana sohlelo lokusebenza se-FaceTime sinikeza nezinqamuleli ze-3D Touch kuzintandokazi zakho.
Indlela ephelele ye-athikili: Ngivela kwa-mac » Apple » Izifundiswa » Ungazisebenzisa kanjani izenzo zomdabu ze-3D Touch ku-iOS 10 (I)
Ngendlela, yini okufanele uyenze ukuze ube nesicelo sezindaba, ingabe esaseSpain noma ngabe kuse-USA kuphela?
Idizayini entsha yesikhungo sesaziso ku-MacOS Sierra
I-Apple Maps inikeza amakhasi ewebhu asesidlangalaleni ngamanye amaphuzu wokuthakazelisa